Chrome WOWOW mpivarotra vilany potika Chrome
Home / Fitaovana an-dakozia / Faucets lakozia ao an-dakozia / WOWOW Varotra an-dakozia an-dakozia mameno paosy sand Chrome
WOWOW Varotra lakozia any an-dakozia vita amin'ny lakozia
Ny haavon'ny mpanefy vilany eo ambonin'ny fatana dia ankasitrahan'ny mpanjifa avy any Taiwan, Japon, Alemana ary Amerika.
Novidiana tamin'ny milina incision sy ny lathes, dia misy refy voafaritra tsara.
Ity vokatra ity dia voamarina ambanin'ny ISO.
Mora ny haingam-pandeha, ity grika an-dakozia ity dia mora miditra any amin'ireo toerana sarotra idirana.
2311100C torolàlana fametrahana
Takelaka masaka vilany ho an'ny fatana an-dakozia 2311100C
Toba iray famonoana poti-boaty dia azo atao mofomamy azo tanterahina ho an'ny lakozinao amin'ny sandriny lava sy iraisana. Raha ny mahazatra, ny tavoahangy feno vilany dia mihantona eo amin'ny fatana ao an-dakozia. Amin'izany fomba izany no ahafahanao mameno rano amin'ny vilany, raha toa izy ireo dia efa mipetraka ao amin'ny fatana. Tahaka izany dia tsy mila mitondra vongan-drano feno rano ianao avy any amin'ny lakozian'ny lakozia ka mankany amin'ny fatin-dakozonao. Ny faucets nentim-paharazana lovia dia tsy tokony hafangaro amin'ny faucet an-dakozia hafa izay manana sandry mitambatra. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny potiky feno vilany iray ary ny boaty milentika ao an-dakozia dia ny rano mafana. Amin'ny vilia famenoana vilany iray ihany no mila rano mangatsiaka iray. Saingy mazava ho azy fa afaka manambatra moramora feno vilany feno plastika miaraka amin'ny boaty milentika miaraka any an-dakozia hahatratrarana firindrana farany amin'ny famolavolana ao an-dakozia.
Rehefa mamolavola ny lakoziao ianao, amin'ny voalohany dia matetika no mieritreritra ny fomba tokony ho endriky ny lakozia nofinofisinao. Fa mety ho zava-dehibe kokoa dia ny fampandehanana ny lakoziazinao vaovao. Tsy maintsy mieritreritra ny fomba fahandro ianao, inona ny fitaovana ilainao, izay ilainao loharanom-pahazavana, ary ahoana no ahafahanao mihazona mora foana ny lakozia. Ny fitaovana tsirairay ao an-dakozia ao dia manome safidy maro isan-karazany. Manisa ihany koa ireo faucets ao an-dakozia. Fa lafin-javatra iray izay hadino matetika, dia ny fampiasa farany amin'ny gropy filler potika. Tsotra satria tsy be mpahalala. Etsy andaniny, ity karazana boakan'ny lakozia ity dia afaka manatsara ny fiainanao kokoa rehefa mahandro.
Nahoana ianao no mila faucet feno vilany?
Ny projet lehibe indrindra amin'ny poketra feno vilany dia mamonjy anao mitondra vilany mavesatra feno rano avy any an-dakozia mankamin'ny fatana fandrehanao. Ity dia mety ho tombony lehibe ho anao raha tsy azonao atao na tsy te-hitondra entana mavesatra. Ny fitondrana vilany mavesatra dia mety hiteraka tady amin'ny tananao, sandry ary lamosinao. Mety hanelingelina anao izany rehefa mahatsapa fanaintainana ao an-damosinao na sandrinao. Ankoatr'izay, dia mety hitranga fa ny vilany lehibe dia tsy mifanaraka amin'ny fatin'ny lakozian'ny lakozia. Noho izany antony izany dia mety ho sarotra ny mameno vilany lehibe iray amin'ny rano.
Azonao atao ny misafidy safidy roa mifandraika amin'ny faucets famenoana vilany. Misy fantsona famenoana vilany tokana sy mitambatra. Miankina amin'ny haben'ny fatana an-dakozanao izany, izay hahavita ny tsara indrindra ho anao. Raha manana fatana ao an-dakozia misy mpandoro maro ianao dia hampiasaina tsara indrindra ny fantsom-boaloboka feno mpanamory noho ny fahatratrarany azy. Ny WOWOW Modern Farmhouse Pot Filler Faucet Polished Chrome dia manome anao sandry mitambatra roa miaraka amin'ny 20 santimetatra. Amin'ity faucet mpameno vilany lava ity dia azonao atao ny mahatratra ny faritra rehetra amin'ny fatana lakozia ary noho izany manome fiononana faran'izay betsaka.
Zava-misy poti-boary feno fikorisana
Ny fantsom-pamenoana vilany WOWOW dia mora raisina amin'ny sandry mitambatra, satria azonao aforitra miverina mankamin'ny rindrin'ny fatana ny tànana. Amin'izany fomba izany dia tsy haka toerana ao an-dakoziananao izy ary tsy ho hitan'ny maso. Noho ny lamina mifanaraka aminy dia azonao atao ny mamonjy toerana malalaka ao an-dakozia. Ity faucet mpameno vilany avo lenta ity dia azo esorina mba hanajana ny endrika kanto ao an-dakozia haingon-trano. Tsy ho hitanao akory ity faucet famenon-vilany ity eo amin'ny rindrinao!
Matahotra ny olona maro fa hisy fantsom-panafom-bolo hivoaka ary hiteraka fahasimban'ny rano ao an-dakozanao. Tsy toy ny faucets milentika any an-dakozia, fa ny rano mitete kosa mety ho tratran'ilay fantson-dakozia. Miaraka amin'ny fantsom-pameno vilany ny rano dia mety hidina amin'ny fatana an-dakozia na eo amin'ny latabatra dakozia ianao. Ary amin'ny farany eo amin'ny gorodonao an-dakozia izay mety hiteraka fahasimbana kely. Noho ny antony azo antoka dia matetika ny paompy mpameno vilany no misy fitaovana roa. Amin'izany fomba izany dia miaro indroa amin'ny rano mitete ny faucet famenoana vilany. Ny sandry lava an'ny faucet mpameno vilan'ny WOWOW dia manana valves roa ho an'ny fifehezana roa. Rehefa vitanao ny mahandro dia vonoinao ihany koa ny valizy lehibe, mba tsy hisy rano ho raraka. Amin'izany no ahazoana antoka ny fiarovana ny lakozia.
Faucet mameno takelaka avo lenta
Ny WOWOW Modern Farmhouse Pot Filler Faucet Polished Chrome dia namboarin'ny teknolojia farany indrindra. Amin'izany fomba izany ny WOWOW dia miantoka ny refy mety amin'ity poti -na feno vilany ity ho an'ny fampisehoana tsara indrindra. Ity boaty feno filler WOWOW ity dia manolotra fiainana maharitra satria ny kalitaony anatiny tsara sy avo lenta. Vita vita amin'ny varahina manaloka lehibe (varahina) izy io. Azo antoka ianao fa misotro rano fisotro madio izay mivoaka avy ao anaty gros ity nefa tsy misy zavatra mampidi-doza. Ny fahasalamanao dia mihoatra ny zava-dehibe indrindra! Tsy nisy na inona na inona ity vokatra WOWOW ity dia nanamarina ny ISO.
Famatsiana rano tsara miaraka amin'ny makia feno mpanefy ity
Miaraka amin'ny hantsam-panazavana avo lenta amin'ny 360 degre, afaka miditra any amin'ny toerana rehetra ianao ary mameno izay mora. Ny valves dia vita amin'ny kalitao tsara indrindra ary tena mahazo aina. Hitanao avy hatrany ilay kalitao rehefa mampiasa valifaty ianao. Ny fomba fantsona etsy ankilany dia tonga lafatra amin'ny famenoana rano. Izy io dia manome tsindry maharitra mba hanomezana rano mandeha tsy tapaka. Ny fehin-kibo manintona avo loatra dia misoroka ny famafana sy ny fandatsana mba hanomezana fampiononana anao tsara indrindra. Ary izany indrindra no ilainao amin'ny faucets an-dakozia!
Ny vongan'ny mpanefy taninketsan'ny WOWOW dia vita amin'ny voina nopotehina sy nampihodinina. Manana famaranana chrome vita misy polisa izay mety aminy ao amin'ny lakozia famolavolana. Sarotra feno rano ny potaka feno WOWOW dia marefo ary mora sasana. Ny fitazonana ny tavoahangy feno vilany dia mora ihany koa. Azonao atao ny mihazona poketra mameno ny tavoahangy feno vaovao amin'ny fotoana maharitra. WOWOW dia manome valiny 5 taona amin'ny faucets rehetra. Noho izany antony izany dia fantatrao fa nahita poti feno feno vilany ianao izay manome anao ny tahan-kalitao tsara indrindra. Miaraka amin'ny antoka averin'ny vola 90 andro, azonao atao ny mamerina ny poketra feno vilany izay tsy misy olana raha tsy tianao izany. Fantatsika anefa fa tsy ho tanteraka izany. Matoky ny vokatrao izahay!
Ny tombony azo avy amin'ny poti-saosy mameno takelaka amin'ny fomba fohy:
· Fenoy moramora eo amin'ny fatanao ny vilaninao
· Lohana mitambatra azo ampiharina mba hanesorana ny tavoara feno vilany
· Miaramilan'ny fitaovam-piadiana azo trandrahana tsara indrindra
· Mahazo tonga mora any amin'ny toerana tsy azo aleha amin'ny 20 santimetatra ianao
· Famolavola krôma miavaka vita
SKU: 2311100C Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Faucets lakozia ao an-dakozia Tags: voalambolambo, Mpanefy vilany, Wall Mounted
15.51 X 9.61 X 2.05 santimetatra
Chrome fantsona mpameno vilany
Pot Filler Faucet Folding Double Chrome
Varotra / trano fisakafoanana / fonenana / anaty trano
Fantsona fantsom-panafody / mpampifandray NPT; Neoperl ABS aeractor; Fitaovana mitaingina (bolongana vatofantsika vatofantsika ny Fischer alemanina)